Miyuu Warka Wanaagsan oo Kitaabka ku jiro Ilaahay ka Yimid? | War Wanaagsan
1. Ayuu ka yimid Kitaabka Quduuska ah?
Warka wanaagsan oo ah inay dadku weligood ku noolaan doonaan adduunka wuxuu ku qoran yahay Kitaabka Quduuska ah. (Sabuurradii 37:29) Kitaabka Quduuska ah wuxuu u kala qaybsamaa 66 buugagood. Afartan niman oo aammin ah buu Ilaahay isticmaalay inay qoraan. In ku dhow 3,500 oo sanadood kahor buu Muuse qoray shanta buug oo u horreeya. Buugga u dambeeya waxaa qoray rasuulka Yooxanaa 1,900 oo sanadood waageenna kahor. Fekradahee bay qorayaashii Kitaabka Quduuska ah qoreen? Ilaahay ruuxiisa quduuska ah buu isticmaalay siduu ugu gudbiyo qorayaasha Kitaabka Quduuska ah waxay qori lahaayeen. (2 Samuuʼeel 23:2) Waxay qoreen fekradihii Ilaahay oo keliya kuwoodii may qorin. Sidaas awgeed Kitaabka Quduuska ah wuxuu ka yimaadday Yehowah.—Akhri 2 Timoteyos 3:16; 2 Butros 1:20, 21.
Daawo fiidiyowga Ayuu ka Yimid Kitaabka Quduuska ah?
2. Sidee baan u hubi karnaa inuu Kitaabka Quduuska ah run yahay?
Waxaynu ognahay inuu Kitaabka Quduuska ah Ilaahay ka yimid. Waayo qalad laʼaan buu si faahfaahsan inoo sii sheegay mustaqbalka soo socda. Ninna sidaas oo kale ma sameyn karo. (Yashuuca 23:14) Ilaaha Qaadirka ah oo keliya baa arki kara si qalad lahayn mustaqbalka binuʼaadanka.—Akhri Ishacyaah 42:9; 46:10.
Buug Ilaahay ka yimid mid la mid ah ma jiro. Kitaabka Quduuska ah bilyanno jeer baa la daabacay oo boqolaal luqaddood baa lugu faafiyay. Inkastuu Kitaabka Quduuska ah qadiimi yahay cilmiga wuu raacsan yahay. Xitaa wixii ay afartankiisa qorayaal qoreen iska may hor iman. Welibana qoraalka Kitaabka Quduuska ah wuxuu caddeynayaa Ilaahay jacaylkiisa. Ilaa iyo hadda awood buu leeyahay siduu nolosha dadka u wanaajiyo. Waxyaalahan oo dhan malaayiin bay tusaan inuu Kitaabka Quduuska ah Erayga Ilaahay yahay.—Akhri 1 Tesaloniika 2:13.
Kitaabka Quduuska ah ma la beddelay? Qoraal 2,000 oo sanadood ka badan jiray baa caddeeyay inuu Ilaahay Eraygiisa Quduuska ah si aammin ah inoo soo gaarsiiyay. (Ishacyaah 40:8) Ilaahay ma oggola in Eraygiisa la beddelo.—Akhri Sabuurradii 12:6, 7; 1 Butros 1:24, 25.
Daawo fiidiyowga Sidee Baan u Hubi Karnaa Inuu Kitaabka Quduuska ah Run Yahay?
3. Kitaabka Quduuska ah muxuu sheegaa?
Kitaabka Quduuska ah wuxuu ka hadlaa warka wanaagsan oo ku saabsan ulajeeddada fiican uu Ilaahay binuʼaadanka u hayo. Qoraalku wuxuu inoo micneeyay siday waa hore binuʼaadanka u lumiyeen fursad gaar ah ay ku noolaan lahaayeen jannada dhulka ku taallay. Wuxuuna inoo sheegaa in mustaqbalka janno dhulka dib looga dhigi doono.—Akhri Muujintii 21:4, 5.
Erayga Ilaahay waxa ka tirsan sharciyo, qaynuunno iyo talo. Wuxuuna inoo sheegaa taariikh dheer oo ka hadlaysa siduu Ilaahay binuʼaadanka ula dhaqmi jiray. Taasoo ina tusaysa Ilaahay shakhsiyaddiisa. Sidaas daraaddeed Kitaabka Quduuska ah baa Ilaahay laga bartaa. Wuxuuna kaa dhaadhicinayaa inaad saaxiibnimo la dhisatid Ilaahay sidii nebi Ibraahim.—Akhri Sabuurradii 19:7, 11; Yacquub 2:23; 4:8.
4. Sidee baad Kitaabka Quduuska ah u fahmi kartaa?
Habkii Ciise isticmaali jiray oo kale buu buuggan kuu caawin doonaa sidaad u fahamtid Kitaabka Quduuska ah. Ciise dadkuu u micneyn jiray aayado kala duwan ee Kitaabka Quduuska ah ku qoran “si ay u gartaan Qorniinka.”—Akhri Luukos 24:27, 45.
Waxyaalo sida warka wanaagsan ee Ilaahay loo xiiso geliyo aad bay u yar yihiin. Laakiin dadka qaarkood baa dan ka lahayn kuwo kalena way ka xanaaqaan. Ha niyadjabin. Rajada ad ku raaxaysatid nolosha weligeed ah waxay ku xiran tahay inaad Ilaahay baratid.—Akhri Yooxanaa 17:3.
Wadaag Wadaag Miyuu Warka Wanaagsan Ilaahay ka Yimid?